Wakiillada xisbiga Jubilee ee Baringo oo wajihi doono talaabo anshax marin ah | Star FM
Home Wararka Kenya Wakiillada xisbiga Jubilee ee Baringo oo wajihi doono talaabo anshax marin ah
Wakiillada xisbiga Jubilee ee Baringo oo wajihi doono talaabo anshax marin ah
Wakiillada golaha hoose ee ismaamulka Baringo islamarkaana ka tirsan xisbiga Jubilee ayaa wajihi doona talaabo anshax marin ah ka dib markii ay diideen inay ansixiyaan geddisocodka la doonaya in wax looga beddelo xeerarka wadanka
Guddoomiye ku xigeenka xisbiga Jubilee David Murathe ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa rasmiga ee Twitter-ka ku sheegay in wakiillada ay ka hor yimaadeen go’aanka xisbigaasi ee ahaa in la taageero warbixinta guddiga dib u heshiisiinta iyo mideynta shacabka ee BBI.
Shalay ayay ahayd markii ismaamulka Baringo u noqday dowlad deegaankii ugu horreeyay ay ka soo hor jeystay warbixinta guddiga dib u heshiisiinta iyo mideynta shacabka ee BBI .
Wakiillada golaha hoose ee ismaamulkaasi ayaa si aqlabiyad leh uga hor yimid geddisocodkan.
30 ka mid ah wakiillada ayaa maya u codeeyay warbixinta BBI halka 5 kaliya ay u codeeyeen haa.
Waxaan ka soo qayb gelin kal-fadhiga 5 ka mid ah wakiillada.
Waxaa sidoo kale isla wakhtigaasi ay rabshad ka dhacday xarunta golahaasi ka dib markii wakiillada ay ku kala qaybsameen ansixinta warbixinta BBI.
Fowdada ayaa billaabatay markii guddoomiyaha guddiga cadaaladda iyo arrimaha sharciga ee ismamulkaasi Charles Kosgei uu miiska soo saaray geddisocodkan taas sababtay inay iska ka hor imaadeen wakiillada taageersan iyo kuwa ka soo horjeeda.
Wakiillada taageersan BBI ayaa dalbaday in la joojiyo arrinka halka kuwa ka soo horjeeda ay doonayaan in kal-fadhigaasi go’aan looga gaaro BBI.
Wakiillada ka tirsan xisbiga KANU ee taageersanaa geddisocodkan ayaa sheegay in mooshinka si aan nidaamsaneen loo keenay golaha taasoo horseeday gacan ka hadal.
Waxaa ay ku eedeeyeen wakiillada xulafada la ah madaxweyne ku xigeenka dalka William Ruto ay ku deg degeen soo bandhigida hindise sharciyeedka BBI iyagoona raacin hanaankii sharciga waafaqsanaa oo ay ka mid ahayd ka qaybgalinta dadweynaha.
Waxaa ay intaa ku dareen in hanaankan aan laga soo horjeedsan.
Previous articleSAWIRO:Danjiraha Ingiriiska ee Kenya iyo barasaabka Garissa oo arrimo dhowr ah ka wada hadlay
Next articleDenmark oo lagu xiray 13 qof